Hooyooyinka degmada Matabaan oo silic kala kulma isbitaal la’aan degaanka ka jirta - Radio Ergo
Hooyooyinka degmada Matabaan oo silic kala kulma isbitaal la’aan degaanka ka jirta
(ERGO) – Shamso Faarax Maxamed oo haysta 7 Carruur ah, uurna leh, ayaa ka welwelsan xaalkeeda maadaama degmada Matabaan aysan ku oollin xarun caafimaad oo ay ka heli karto adeegyada hooyada iyo dhallaanka.
Cabsida ayey sheegtay in ay ku korartay kadib markii ay aragtay haween badan oo degmada iyo deegaanada kale ee hoosyimaado ku noola oo inta ay xanuunsadeen loo qaaday degmooyinka Baladweyne iyo Guriceel oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo dhaibaatooyin kala kulmay mudadii ay wadada kusii jireen.
“Wax xarun caafimaad oo aan caawa ka heli karo Matabaan majirto, farmashiyaasha qofka dhiig baxaa dhiig joojin ayaa lagugu sii dhufanaa kabacdiina gaari ayaa lagula sii cararayaa, wax kale oo ay kuu qaban karaan oo ay kuu awoodan majirto welwel weyn ayaan ka qabnaa. Matanaan intaas oo deegaan ayaa hoostimaado, waxaana ku fikirnaa sidaan mar uun isbitaal ku heli laheyn.”
MCH yar oo ku yaalla gudaha degmada ayaan shaqayn labadi bil ee u dambaysay, kadib marki uu hakad galay dhaqaalihii. Aamino Daahir oo ah Madaxa caafimaadka degmada Matabaan ayaa Radio Ergo uga warantay dhibaatooyinka ka dhashay isbitaal la’aanta ka jirta degmada iyo deegaanada kale ee hoos yimaado.
Waxay sheegtay in dhowaan haweenay ku foolatay gudaha magaalada waxna laga qaban waayey si deg ah loogu qaaday isbitaal ku yaalla magaalada Guriceel.
“Baabuur ayaa lagu qaaday oo Guriceel ayaa laga gaarsiiyey. Dhaqterkii markii aan ugeeynay waxaa nagu dhahay gabertan 10 daqiiqo haddii aad lasii maqnaa laheeden xaaladeeda halis ayey gali laheyd, canugii waa ku dadban yahay ayuu dhahay, ma foolan karin ayuu dhahay. Dhiig ayaa lagu xiray habeenkii markii laga qaaday afar saac habeenimo ayey aheyd sagaalkii saac qaliinka ayaa lagu sameeyey canug ayaa laga soo saaray.”
Marka laga soo tago adeeg la’aanta caafimaad waxaa dadka u sii dheer kharashka lagu raacayo gawaarida qaadaya qofka xanuunsan ama haweenka foolanaya. Gaariga wuxuu qaataa 20 doollar sii socdka kaliya. Shamso waxay sheegtay in gabadha ilamaha lagu qalay laga qaaday 300 oo doollar.
Shan kamid carruurteeda ayaa dhigato iskuul iyo dugsi quraan kaasi oo bishii laga qaado 85$ waxaana ay nololsha qoyska ku maareysaa Shamso dukaan ganacsi oo ku yaalla degmada Matabaan.
Dadka kale ee dhibaatooyinka kala kulmaya helitaanka goobo caafimaad ee degmada Matabaan iyo deegnaada kale ee hoos yimaado ee gobolka Hiiraan waxaa kamid ah Qaasim Nuur Xasan oo ah aabbo haysta 9 Carruur ah oo ku nool miyiga deegaanka Geel-kudhal oo xarun caafimaad ay ugu dhowdahay meel u jirta 63 km.
Qaasim ayaa sheegay in 52 oo uga soo doogay abaarihi uu hadda ku dhaqdo tuulada uu degan yahay. Wuxuu sheegay in qaar ka mid ah carruurtiisa ay xanuunsan yhiin, basle aysan jirin xarun caafimaad oo uu geeyo ama in uu meel kale u qaado uusan awoodin.
“Aniga xabad baristamool ah haddii aan u baahano farmashiyaashaan ka soo gadanaa. Hadda qoyskeeyga kaliya 3 canug ayaa ka jiifto, hirgab qandho saa’id ah ayuu leeyahay wax isbitaal ahna ma geeyn farmashiyaasha ayaa baristamool uga raadinaaa. Daawo ma iibsan karo nin soo ceeyrtoobay ayaan ahay oo wax aan hada awoodi karo oo allah abuurtay malaha”
Maamulka caafimaadka degmada Matabaan ayaa sheegay in 190 tuulo in ka badan oo hoostimaada degmada aysan laheyn wax xarun caafimaad ah oo xilligan shaqeeysa. Deegaannada Beergadiid, Galijir, Qodqod iyo gudaha degmada waxaa ku yaalla isbitaalo ay dhiseen dad qurba joog iyo dadka deegaanka oo is kaashaday waloow xilligan ay u xiran yahiin dhaqaatiir iyo dawo la’aanteed.
Aamino Daahir oo ah madaxa caafimaadka degmada Matabaan oo la hadashay Raadiyow Ergo ayaa sheegtay in dhibaatooyin badan ay ka dhasheen isbitaal la’aanta ka jirta degmada iyo deegaanada kale ee hoos yimaado.
“Wax badan ayaa ka dhashay waxaa arkeeysa hooyo meesha ku dhiig baxeyso oo uur leh oo aan haysan adeeg caafimaad, baabur raac aysan haysanin oo laga yaabo in ay meel dheer ku xanuunsato, waxaa laga yaaba in ay meel baabur la’aan ah joogto oo mar walba ay u badan tahay in hooyadaas ay meesha ku dhig baxday ibidii soo hormarto. Waxyaabo badan ayaan kala kulanaa iyo kuwa qalamiso kusoo dhacdo.”
Dugsi sare oo markii ugu horraysay laga hirgaliyay degaanka Dhabad ee Galmudug
Beeraleey dab beerahooda qabsaday xilli ay dagaal kula jireen ayax soo weeraray